Bhizinesi | TeraNews.net |
Razer Blade 15 laptop ine QHD 240Hz OLED skrini
MSI Yemazuva Ano MD271CP YakazaraHD Yakakomberedzwa Monitor
Chuwi RZBox 2022 paRyzen 7 5800H
Dedicated server: chii icho, zvakanakira uye zvisingabatsiri
Sevha yakatsaurirwa ibasa rinopihwa nekambani inotambira iyo inorenda imwe kana akawanda maseva emuviri. Kunze kwe…
Apple inobvisa mapurogiramu ekare kubva kuApp Store
Apple isingatarisirwe innovation yakavhundutsa vanogadzira. Iyo kambani yakafunga kubvisa zvese zvikumbiro zvisina kugamuchira kwenguva yakareba ...
Intel iri kure inoziva kuvharisa ma processors avo
Idzi nhau dzakabva ku pikabu.ru sosi, uko vashandisi veRussia vakatanga kunyunyuta zvakanyanya nezve "kuputsika" kweIntel processors mushure ...
Pane dzimwe nguva apo zvigadzirwa zvemhando yeTaiwanese hazvina kunyorwa pamusika nekuda kwembiri shoma. Izvi ndezve 2008-2012. Hazvizivikanwe…
Ruselectronics inogona kuve mukwikwidzi akananga kuIntel uye Samsung
Iyo Russian subdivision Ruselectronics, inova chikamu cheRostec Corporation, iri kuwedzera zvishoma nezvishoma mumusika. Nezve zvirikuitika uye zvigadzirwa…
Vakuru muSouth Korea vakaburitsa mashoko kuApple neGoogle maererano nekubviswa kwemitambo yekubhadhara muzvitoro zvavo. Maererano ne…
Chero mhando yebhizinesi inosanganisira kuve neyayo webhusaiti yekusimudzira masevhisi kana zvigadzirwa. Uye chikamu chekambani chinosanganisira…
Iyo projekiti "Citroen Skate" zvisina kufanana yakafanana nekutakura kubva mufirimu "Ndiri Robhoti", iyo yakakwezva kutarisisa pachayo. Yakakura chaizvo ...
Germany yakatora danho rekutsigira varidzi vema smartphone
MaGerman anoziva kuverenga mari uye kuyedza kuishandisa zvine musoro. Ichi chaive chikonzero chekutanga chekunyoreswa kwemutemo mutsva wekumisikidza ...
A 3D Printer imicrocomputer-inodzorwa michina chishandiso inokwanisa kuburitsa XNUMXD zvikamu. Wakajairika purinda ...
Zvigadzirwa zvemagetsi zvakaputika muhupenyu hwedu makore mashoma apfuura ari kurasikirwa nechido mavari gore rega rega. Vagadziri vari kuramba vachiwedzera ...
Iwo mafambiro eanoitwa ruoko-akabata makiyi esimbi anogona kunzi akakwira. Sezvo zvese zvikamu zvezviitiko zvevanhu, zvakananga kana zvisina kunangana ...
Iyo Kospet Optimus 2 gadget inogona kunzi zvakachengeteka smartwatch yekupfeka kwezuva nezuva. Iyi haisi chete smart bracelet, asi yakazara-yakazara wachi, ...
Makavha emadziva zvivakwa zvekudzivirira zvakagadzirirwa kudzivirira marara uye guruva kuti risapinda mumvura. Kuwanda kwechimiro ...